उप-निर्वाचनमा जीतहारको गणित | रुपान्तरण
उप-निर्वाचनमा जीतहारको गणित
२१ कार्तिक २०७६, बिहीबार १८:५१
बुधबारको पार्टी बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शंशाक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव तथा केन्द्रिय सदस्य कृष्ण सिटौला बैठक नै वहिष्कार गरेर हिड्ने वातावरण बनेपछि भागवण्डा नै अन्तिम विकल्प बनेको हो । उम्मेदवार एकलौटी छान्नुहोस् भन्दै सभापति शेरवहादुर देउवा सामु घुर्की लगाएर हिंडेपछि पार्टीमा भागवण्डा विकल्प बनेको हो ।
कास्कीमा कांग्रेसको स्थिति
यस्तो छ भागवण्डा
भागवण्डाका कारण प्रदेश सभा उपनिर्वाचन अन्तर्गत वाग्लुङ २ (ख) को टिकट सिटौलाको पक्षमा परेको छ । यो क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा यहीँबाट पराजित नेता जीत शेरचनले टिकट पाएका छन् । सिटौला पक्षधर शेरचन अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका र नेकपा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका स्व. टेकबहादुर घर्तीसँग पराजित भएका थिए । शेरचनलाई आफू पराजित भएको ३ हजार २ सय ६० मत फर्काउनुको साथै थपिएको ३ हजार ६ सय ८६ मतलाई आकर्षित गर्ने चुनौती रहेको छ ।
प्रदेश सभा अन्तर्गत दाङ ३ (ख) बाट केशव आचार्य चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । उनलाई दुई वर्ष अघि बुद्धिराम भण्डारीले गुमाएको ६ हजार ४ सय ३५ मत फिर्ता ल्याउनुका साथै ७ हजार भन्दा बढी थपिएको मत आफ्नो पक्षमा पार्नु पर्ने चुनौती छ । यस क्षेत्रबाट नेकपाले विमला वलीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । विमला स्व. उत्तरकुमार वलीको श्रीमती हुन् । दुई वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा स्व. वली यहाँबाट विजयी भएका थिए ।
भक्तपुर प्रदेश सभा क्षेत्र १ (क) देउवाले आफ्नै भागमा राखेका छन् । यहाँबाट देउवा निकट कृष्ण भंडेलले उम्मेदवारी मनोनयन गराइसकेका छन् । भंडेल नेकपाका देवीप्रसाद ढकालसँग चुनावी मैदानमा भिड्दै छन् ।